Tambajotra mafia, manondrana harem-pirenena ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Miteraka resabe ny momba ity fanondranana volamena 73,5 kg ity. Ny mpitondra manana ny lazainy ; ny mpanohitra mandrirotra izay ambarany. Tsy resaka mpitondra na mpanohitra anefa izy ity, fa resaka harem-pirenena misy mangalatra ka ny olom-pirenena no tokony ho sarotiny.
Maro ny firenena ahitana fanodinkondinana sy tambajotran’ny ratsy toy izao ; saingy matoa matanjaka ny firenena ary manankarena dia satria misy rafitra matanjaka natao hifehy izany herin’ny ratsy izany. Eto amintsika izany dia malemy ny fitondrana ka mampanjaka ny gaboraraka sy ny baranahiny. Tsy dia ny rafitra loatra no malemy fa fahantrana mangeja ka mivaralila ny raharaha samihafa.
Dia tsy nisy nahita ny fandehan-javatra…Ny mpitondra nandray fitenenana dia samy nilaza fa tsy nisy nahita na ny fadintseranana na ny mpitandro filaminana, na ny fahasalamana. Ny ACM no tompon’antoka amin’izany. Izy ireo indray nahita ny fiara nanidina fa tsy nahita ny entam-barotra. Dia raikitra ny hoe « antsokosoko e ». Antsokosoko anefa hita ihany ny lalan-kombana satria samy nilaza fa nisy olona tsy nandeha tanatin’ilay fiaramanidina, nandalo tany Toliara, ary rehefa niverina dia aiza moa izany io fiaramanidina io ? An’iza ?
Tsy mba misy resaka mihitsy ve izany ny fadintseranana na ny douane. Iza no mibaiko ny service douanier ? Ny minisitry ny Fitantanam-bola ve manam-pahefana amin’ny fanaraha-maso ny harena an-kibon’ny tany mivoaka sy miditra koa ? Koa satria ny filoha nilaza fa tsy asiana fandeferana izy ity, hatreto anefa mbola tsy nisy mpaniraka sy mpanome baiko nidoboka eny Tsiafahy.
Samy tsy misy te ho tompon’andraikitra ary samy miala andraikitra. Ny dikany, samy tsy te hamato-tena ao satria samy mahalala fa mamatotra ny raharaha.
Ny sisin-tany anefa mihidy. Anaty hamehana isika izao. Ny fanondranana voarara ! dia ahoana àry ? Iza moa no tompon’andraikitra manara-maso ny sisin-tany ? Iza no mametraka lalàna momba ny hamehana ? Iza no manakana ny fahafahana manondrana ? Ataon’ny fanjakana ahoana no fanaraha-maso sy fanatanterahana ny fanapahan-kevitra raisiny. Natao ho an’ny rehetra ny fepetra raisina, fa tsy hoe, tsy azo atao ny mamory olona…Ianareo izany fa tsy izahay… Tsy azo atao ny mivoaka… Ianareo izany fa tsy izahay… ary ny manondrana ? Ary ny manidina ? .
Dia ahoana hoy ny « Tandroka aron’ny vozona… ? Anisan’ny nandray fitenena betsaka momba iny raharaha iny « ny tandroka aron’ny vozona » : ny minisitry ny Fiarovana, ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarmaria ary ny lehiben’ny fitsarana.. Izany hoe, ny tompon’andraikitry ny fiarovam-pirenena rehetra. Ny fanambarana moa dia milaza fa nankinin’ny filoha amin’ny SEG ny andraikitra hanao ny fanadihadiana mahaleo tena ary tsy « hisy indra fo na iza na iza tafiditra ao ». Sady nampiany hoe : « ny filoham-pirenena dia tsy miditra amin’io fa miady amin’ny fanondranana volamena ». Hatraiza moa izany ity ady atao ity? Ny lehiben’ny Governemanta moa dia mangina. Asa re ! Fa samy ampangain’ny ataony eny ny tsirairay !
Ny ahy koa izao ny fanontaniako dia hoe « aiza daholo ny lavaka nivoahan’izany ? Ary paosin’iza no lavaka hidiran’ilay 4,5 tapitrisa dolara ? Mba rahoviana ny lavaka vao hahalala feno? Isan-taona anefa, tsy latsaky ny 10 taonina ny harenantsika mankany Dubai… Dia i Dubai no miravaka volamena, fa isika dia rakotra tanimena !
Miandry isika ny ho tohiny…
Matoan-dahatsoratra : Sisiny sy ny afovoany - il y a 3 jours
Matoan-dahatsoratra : Dinika momba ny fahefana amin’ny tany demokratika - il y a 8 jours